Pokémon Duel iri pano, iyo nyowani Pokémon mutambo weIOS | IPhone nhau
Pokémon Duel iri pano, mutsva Pokémon mutambo weIOS
Vazhinji vakatokanganwa zvese mhirizhonga yakakomberedza Pokémon Go, mumwe wemitambo yekutanga yeiyo hofori yeJapan, Nintendo, yenyika yepafoni nhare. Uye ndeyekuti mhando iyi yevhidhiyo console yakasarudzika mune yedu iDevices. Mitambo yatakatamba muhucheche hwedu uye iyo inounza isu vane hushamwari Pokémon mavara.
Zvakanaka, Pokémon nyowani iri kuuya, mutambo mutsva une simba rakasiyana nerekutengesa zvakanyanya Pokémon Go, chii chitsva chiri Pokémon Duel, mutambo wezano wauchazoshandisa maawa nemaawa. Mushure mekusvetuka isu tinokuudza iwe zvese izvo zvemutambo mutsva uyu wemaNice Pokémons ...
Ehezve, kutanga pane zvese ini ndichakuudza izvozvo Pokémon Duel parizvino inongowanikwa muUS App Store, asi zvinotarisirwa kuvhura pane ese mamwe maApp Store mumazuva mashoma anotevera. Na Pokémon Go isu ticharidza mune Virtual bhodhi ine 6 Pokémon iyo isu yatinoda kurwa neayo matanhatu Pokémon evavengi vedu. Ndokunge, isu tine bhodhi mune yakasarudzika chess maitiro, kuburikidza ayo atinogona kufambisa yedu Pokémon, kana ichinge yasangana nePokémon yevanopikisana nesu ivo vacharwa kuti vaenderere mberi nerwendo kuenda kune imwe chikamu chebhodhi.
Ehe, Pokemon imwe neimwe ine masimba akasiyana, uye yega yega inogona kutora akati wandei matanho kuti vasvike kwavanoenda, saka iwe uchafanirwa kushandisa yega yega Pokémon zvine hungwaru (sarudza nzira dzakasiyana kuti usvike kumagumo kwebhodhi kana uzvishandise kuvhara nzira yeimwe Pokémon). Mutambo mutsva unobatana nerondedzero yeconsoics echinyakare enhare mbozha, isu tichaona painotangwa pasirese uye kana ikawana mukurumbira uyo Pokémon Go aive nawo zhizha rapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon Duel iri pano, mutsva Pokémon mutambo weIOS
Iyo "Theatre Mode" yemakuhwa ichauyawo kuApple Watch
Muturikiri, muturikiri wemitauro makumi mashanu nemasere kwenguva yakati rebei